dagaal – Janaay Media
06:47: PM Wednesday August 21, 2019
Maamulka Galmudug ayaa ka hadlay Amaanka deeganadda Maamulkaas, iyo dagaalka Xarakadda al-shabaab. Wasiirka Amniga Maamulka Galmudug Saadaq Shiikh Yuusuf oo warbaahinta kula hadlay Magaaladda Dhuusa-mareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa sheegay in amniga Deeganadda Maamulkaas uu yahay mid la isku haleyn karo. Waxa uu sheegay in ciidamadda amaanka Galmudug heegan la galiyay,islamarkaana ay diyaar u yihiin
Posted by Abdikadar Hassan - March 19, 2019
Ciidanka ka tirsan Al-shabaab ayaa xalaya gudaha ugalay Degmada Balcad ee Gobalka Shabeelaha Dhexe ka dib weerar ay Degmada uga soo qaadeen dhowr jiho. dadka Magaalada ayaa xalay hurdada uga soo toosay dhawaaqa rasaasta culus oo ka socto gudaha degmada Balcad islamarkaan is weydaarsanayaa Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Al-shabaab. Mas’uuliyiinta Maamulka Degmada Balcad ayaa Xaqiijiyey
Ciidamada ammaanka ee DFS oo hub kala duwan ka furtay dagaalyahanada al-shabaab
Ciidamada amniga ayaa ka furtay hub kala duwan kooxda dagaakyahano ka tirsan ururka al-Shabaab ka dib hawlgal ay ka fuliyeen degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeelaha Hoose. Habeenimadii 09-kii bishaan Maarso ayay Ciidamadu weerar ku qaadeen xaafadda Hantiwadaag halkaas oo markiiba ay ka carareen dagaalyahanadi ka tirsana ururuka al-shabaab. Ciidamadu waxeey gacanta ku dhigeen noocyo kala
Dagaal dhex maray ciidamada Jabuuti iyo Al-shabab oo ka dhacay Gobalka Hiiraan
Posted by Abdikadar Hassan - February 19, 2019
Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo ka dhacay agagaarka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Dagaalka oo muddo saacado ah qaatay ayaa waxaa uu u dhexeeyay Ciidamada Jabuuti oo garab ka helaya kuwa dowladda iyo dagaalamayaal ka tirsan Al Shabaab. Waxaana la sheegay in dagaalkan uu yimid, kadib markii qarax Miino Al
Posted by Abdikadar Hassan - February 7, 2019
Warar ka ay Jinaay Media ka heleeyso magaalo madaxda gobalka Baay ahna xaruunta kumeel gaarka ah ee doowlad gobaleedka Koonfur-galbeed Soomaaliya sheegya in saaka oo Khamiis ah waxaa ka dhacay israsaaseeyn u dhaxeysey labo maleeshiyo beeleed. Israsaaseeynta ayaa waxeey ka dhacday duleedka magaalada Baydhabo. Warar ka ayaa intaas waxeey ku darayaan in dagaal kaasi uu